मधेसी राजनीति, महिला खै ? | चितवन पोष्ट दैनिक
मधेसी राजनीति, महिला खै ?
२०७० फाल्गुन ५, सोमबार ०२:५७ गते
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लडेकामध्ये निकै थोरै मात्रै महिला उम्मेदवारले जिते । त्यसरी जित्नेमध्ये मधेसी महिलाको स्थान सबैभन्दा कमजोर छ । महिला त्यसै त राजनीतिबाट पछाडि पारिएका छन्, त्यसमा पनि मधेसी महिलाको राजनीतिमा पहुँच झनै कमजोर छ । किनकि, मधेसी महिला शैक्षिक र आर्थिक रुपमा पनि पछाडि छन् ।
०६४ मा सम्पन्न भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा देशभरबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत ३० जना महिलाले चुनाव जितेका थिए । तीमध्ये पाँच जना मधेसी थिए । जब कि, दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत चुनाव जित्ने महिलाको सङ्ख्या घटेर १० मा पुग्यो, जसमध्ये चार जनामात्रै मधेसी महिलाले चुनाव जिते ।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सप्तरीबाट रेणुकुमारी यादव, धनुषाबाट रामकुमारीदेवी यादव, सर्लाहीबाट सुमित्रादेवी यादव, पर्साबाट करिमा बेगम र कैलालीबाट रुपा सोसी चौधरीले प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जितेका थिए । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा भने सिरहाबाट सीता यादव, महोत्तरीबाट किरण यादव र दाङबाट पार्वती डीसी चौधरी र सुशीला चौधरीले चुनाव जितेका छन् ।
प्रत्यक्षतर्फ मात्रै होइन, समानुपातिक सूचीबाट पनि संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने मधेसी महिलाको सङ्ख्या पहिलो संविधानसभाको तुलनामा घटेको देखिन्छ । पहिलो संविधानसभामा ११ राजनीतिक दलले समानुपातिकतर्फबाट ५८ जना मधेसी महिलालाई संविधानसभामा पठाएका थिए । तर, यसपटक १५ वटा दलले ५६ जनालाई समानुपातिक सभासद् बनाएका छन् । यसरी हेर्दा दलको सङ्ख्या बढे पनि मधेसी महिलाको सहभागितामा वृद्धि हुन सकेको देखिँदैन ।
अहिलेको संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको सङ्ख्या ३० छ, जसमध्ये महिला प्रतिनिधि पठाउने दलको सङ्ख्या २१ छ भने मधेसी महिला पठाउने राजनीतिक दलको सङ्ख्या १५ मात्रै छ । अचम्म त के छ भने क्षेत्रीय राजनीति गरिरहेका मधेसवादी दलले पठाएका महिला उम्मेदवारमा मधेसी दलितको सङ्ख्या एक जना मात्रै छ । यसले मधेसी महिलाको कमजोर राजनीतिक उपस्थितिलाई छर्लङ्ग पार्दछ । मधेसी समुदायमा सबभन्दा पछाडि पारिएका मधेसी दलित महिलाको अवस्था भने झनै कमजोर देखिन्छ । कुल मधेसी महिलामध्ये जम्मा आठ जना मात्रै मधेसी दलित महिला उम्मेदवार छनोटमा परेका छन् ।
मधेसी महिलाको राजनीतिमा कमजोर सहभागिताका पछाडि राजनीतिक र सामाजिक कारण जिम्मेवार छन् । सिरहा–३ बाट चुनाव जितेकी काङ्ग्रेस सभासद् सीतादेवी यादव मधेसमा महिलाले राजनीति गर्नु सजिलो नरहेको टिप्पणी गर्छिन् । १३ वर्षदेखि लगातार जिल्ला सभापति रहेकी सीताको अनुभवमा मधेसी महिलाले चुनावमा लड्नु र चुनाव जित्नु त परैको कुरा, राजनीतिमा सक्रिय हुने अवसरसमेत सजिलै पाउँदैनन् । उनको बुझाइमा महिलालाई कमजोर ठान्ने मधेसी समाज यसका निम्ति जिम्मेवार छ । भन्छिन्, ‘प्रतिस्पर्धी पुरूष उम्मेदवारसँग चुनाव लड्नै मधेसी महिलालाई अप्ठ्यारो छ । यसका पछाडि जातीय, सामाजिक र सांस्कृतिक कारणलाई उनी जिम्मेवार ठह¥याउँछिन् ।
मध्यमधेसमा महिलाको साक्षरता प्रतिशत सबैभन्दा कमजोर रहनु र राजनीतिमा महिलाको सक्रियतालाई सांस्कृतिक रुपमा नै नरूचाइने कारणले नै महिला राजनीतिमा सक्रिय देखिँदैनन् । सक्रिय भएका थोरै महिलामध्ये कमैले मात्रै निर्वाचनमा पार्टीको टिकट पाउँछन् र तीमध्ये एकाधले मात्रै चुनाव जित्ने गर्दछन् । कमजोर साक्षरता प्रतिशत मधेसी महिलाको राजनीतिमा प्रवेश गर्नबाट रोक्ने पहिलो अवरोध हो । पहाडी महिलाको साक्षरता प्रतिशत ६३ हुँदा मधेसका महिलाको ३६ प्रतिशत मात्रै छ, जसमध्ये ८५ प्रतिशत मधेसी दलित महिला साक्षर छैनन् । यो तथ्याङ्कबाट मध्यमधेसका आठ जिल्लालाई अलग्याएर हेर्ने हो भने झनै कमजोर अवस्था फेला पर्दछ । मधेस राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर प्रश्न गर्छन्– ‘यस्तो अवस्थामा मधेसी महिला कसरी राजनीतिमा सक्रिय रहन सक्छन् ?’
वीरगन्जस्थित ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसकी उपप्राध्यापक सुष्मा तिवारीको बुझाइमा मधेसी महिलाको राजनीतिमा न्यून सहभागिता नै उनको प्रतिनिधित्वको पहिलो अवरोध हो । भन्छिन्– सकेसम्म महिलालाई राजनीतिमा सहभागी गराउने अवसर नै मधेसी समुदायले दिँदैन । यस्तो अवसर पाउने महिलालाई राजनीतिक दलले चुनावमा उठाउने हिम्मत गर्दैनन् । किनकि, उनीहरु महिलाले चुनाव जित्छन् भन्ने विश्वास राख्दैनन् । तिवारीको अनुभवमा चुनावमा हुने चर्को खर्च पनि महिला उम्मेदवारका निम्ति अर्को बाधक त¤व हो । भन्छिन्– ‘महिला आर्थिक रुपमा कमजोर छन्, त्यसैले पनि उनीहरु प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लडेर राजनीतिमा होमिनुभन्दा समानुपातिकको ढोका प्रयोग गर्न उचित ठान्छन्, जसले मधेसी महिला राजनीतिलाई कमजोर बनाइरहेको छ ।’
नेपाली काङ्ग्रेसबाट चुनाव लडेर विजयी भएकी महोत्तरी–२ बाट चुनाव जितेकी सभासद् किरण यादव महिला उम्मेदवारले चुनाव नजित्नुका पछाडि आर्थिक कारण सबैभन्दा धेरै जिम्मेवार रहेको बताउँछिन् । भन्छिन्– एक त, सबैजसो पार्टीले मधेसी महिलालाई प्रत्यक्षतर्फको टिकट दिन डराउँछन् । टिकट पाइहालेकाले पनि आर्थिक र सामाजिक रुपमा चुनाव लड्न सक्दैनन् । किरणको बुझाइमा मधेसी महिलाले प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जितेर राजनीतिमा सक्रिय नभएसम्म उसको राजनीतिक भविष्यको विकास हुन सक्दैन । भन्छिन्– ‘त्यसैले पनि दलले मधेसी महिलाको नेतृत्व क्षमता विकास गर्नमा ध्यान दिनुपर्छ ।’
मधेसी महिला राजनीतिलाई गति दिनु सजिलो भने छैन । जानकारहरुको बुझाइमा राजनीतिक दलले नै मधेसी महिलालाई पत्याउँदैनन् । किनकि, ०४६ पछि मात्रै बिस्तारै खुल्न थालेको मधेसी समाजमा महिलाको राजनीतिक सहभागिता अत्यन्तै कमजोर छ । सभासद् किरण भन्छिन्– ‘अधिकांश राजनीतिक दल मधेसी महिलाको लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि खोज्छन्, जब कि लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका मधेसी महिला नै छैनन् । उपप्राध्यापक तिवारी पनि किरणको भनाइमा सहमत छिन् । भन्छिन्– ‘मधेसी महिलालाई जिल्ला र गाउँ तहदेखि नै सङ्गठनमा सहभागी नबनाएसम्म महिला नेतृत्वको विकास हुँदैन । यसो भएको खण्डमा मात्रै चुनावमा उम्मेदवारी दिन सक्ने मधेसी महिलाको अभाव टर्नेछ ।’
मध्यमधेस भनेर चिनिने बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरी मधेसी जनसङ्ख्याको सघनता भएका जिल्ला हुन् । यो निर्वाचनमा देशभरिका कुल मतदातामध्ये मध्यमधेसका मतदाता मात्रै १९ दशमलव २६ प्रतिशत रहेका थिए । त्यसैले, यिनै आठ जिल्ला नै मधेसी महिला राजनीतिको पनि केन्द्र हो । ०५६ पछिका निर्वाचनमा मध्यमधेसका यी आठ जिल्लामा महिला राजनीतिको अवस्था झनै कमजोर बन्दै गएको निर्वाचनका परिणामले देखाउँछन् ।
०५६ को आमनिर्वाचनमा मध्यमधेसका आठ जिल्लामा ३६ निर्वाचन क्षेत्र थिए । त्यतिबेला तीन महिला उम्मेदवारले जित हासिल गरेका थिए । अर्थात्, आठ दशमलव ३३ प्रतिशत महिलाले चुनाव जितेका थिए । तर, त्यसपछिका निर्वाचनमा यी जिल्लाबाट निर्वाचित महिला उम्मेदवारको उपस्थिति प्रतिशतका आधारमा क्रमशः खस्कँदो क्रममा छ । पहिलो र दोस्रो दुवै निर्वाचनमा यी आठ जिल्लामा ४८ निर्वाचन क्षेत्रबाट ४८ उम्मेदवार विजयी भएका थिए, जसमध्ये पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा चार जना अर्थात् आठ दशमलव ३६ प्रतिशतले र दोस्रो निर्वाचनमा दुई अर्थात् चार दशमलव १७ प्रतिशत महिला उम्मेदवारले चुनाव जितेका थिए । चुनाव जित्ने महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या जसरी घट्दो छ त्यसरी नै प्रतिस्पर्धामा दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहने महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या पनि घट्दो छ ।
अचम्म त के छ भने मध्यमधेसको महिला राजनीति कुनै निश्चित जातविशेषको पकडबाट बाहिर जान सकेको छैन । जस्तो कि, ०५६ यताका तीन निर्वाचनमा मध्यमधेसबाट जितेका महिला उम्मेदवारमध्ये अधिकांश यादव समुदायका महिला उम्मेदवार छन् । ०५६ का तीन विजेता उम्मेदवारमध्ये दुई यादव थिए भने ०६३ को निर्वाचनका विजयी चारमध्ये तीन र दोस्रो संविधानसभाका विजयी दुईमध्ये दुईजना नै यादव समुदायका छन् । जब कि राष्ट्रिय जनगणना ०६८ अनुसार देशभर यादवको जनसाङ्ख्यिक रूप नवौँ स्थानमा छ भने तराईको कुल जनसङ्ख्यामा यादवको जनसङ्ख्या सात दशमलव ८१ प्रतिशत छ ।
सञ्चारिका फिचर सेवा)